Chọọchị C3 - WRSP
C3 URLỌ NLỌ URLỌ
1952 (May 21): A mụrụ Phil Pringle na Masterton, New Zealand.
1971: Phil nwere ọhụụ nke ekwensu na-agba ya gburugburu. Jọ jidere ya, ya akpọọ Jizọs!
1971: Phil na enyi nwanyị nwanyị Christine (nke a maara dị ka "Chris" n'ime njem ahụ) zara oku oku ebe a na-akpọ Assemblylọ Nzukọ nke Chineke na Sydenham, mpaghara dịpụrụ adịpụ nke Christchurch. Ha mụrụ ọzọ.
1971 (August 8): Phil na Chris lụrụ.
1972: Mgbe ọ bi na Oxford Terrace, New Zealand, onye ụkọchukwu si Sydney, Paul Collins, gara otu n'ime nzukọ ụlọ Phil na Chris. O kwuru okwu ahụ, “Oo, anyị chọrọ ihe dịka nke a na Sydney,” wee si otú a kụọ mkpụrụ nke ọhụhụ Phil na ọ ga-ehiwe otu ụka na Sydney otu ụbọchị.
1973: A chụpụrụ pastọ Dennis Barton na Chọọchị Sydenham nke Chineke. Phil na Chris soro ya na chọọchị ọhụrụ ya na Christchurch, ebe ha ghọrọ Ndị Ntorobịa Ntorobịa.
1978: Phil natara oku oku ikwusa ozi na Madras, India. Mgbe ọ na-alaghachi New Zealand si South Asia, ụgbọelu ya rutere na Sydney. Ọ nụziri olu (nke ọ kọwara dịka olu Chineke) na-asị, "Achọrọ m ka ị bịa Sydney."
1979: Na Lyttleton, New Zealand, Phil tụrụ anya ịmalite ụka na Sydney nke nwere Arts na Bible College.
1980: Phil na Chris si na Lyttleton kwaga Sydney iji malite Christian Center Northside Church.
1980: Chọọchị kwadoro ọrụ mbụ ya (Ọrụ Ista) na Dee Why Surf Club na Oxford Falls. Ọ bụ naanị mmadụ iri na abụọ bịara ya.
1984: Oxford Falls Grammar School na C3 College guzobere.
2008: Na nzukọ “Here We Go” zuru ụwa ọnụ nke emere na Hawaii, Christian City Church kwupụtara na ọ ga-agbanwe aha ya na "C3 Church".
2020: C3 Church na-elekọta ụka 594 na mba iri isii na anọ, yana ndị otu ụwa karịrị 100,000.
A mụrụ Phil Pringle na Mee 21, 1952 na Masterton, New Zealand site n'ezina ụlọ nke ụlọ elu. Mgbe ọ dị obere, nne ya nwụrụ na ọrịa kansa ụbụrụ. Christine Pringle (onye akpọrọ "Chris" n'ime otu C3) si n'ọkwa ọkwa dị ala, nna ya nwụkwara mgbe ọ ka bụ naanị nwa ọhụrụ. Ha abụọ bu ụzọ zute dịka ụmụaka na-etolite na Masterton, mana ọ bụ rue mgbe ha abụọ gara Wairarapa College, ebe ha were otu klaasị Bekee na akụkọ ihe mere eme, ka ha ghọrọ enyi, n'ikpeazụ, ndị nwere obi ụtọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Ha abụọ jikọtara na mmasị ha nwere maka nka, egwu, na ihe nkiri (Shin 2014). Mgbe ụlọ akwụkwọ sekọndrị Phil bidoro ịrụ ọrụ dị ka onye na-achị mkpofu ma na-aga Arts School, ebe Chris gụrụ akwụkwọ iji bụrụ onye nkuzi ụlọ akwụkwọ ọta akara.
Mgbe ọ dị afọ na 1960, di na nwunye ahụ sonyeere na òtù hippie New Zealand; N’afọ iri na ụma ha toro ogologo ntutu ha, jiri ọgwụ na-eme nchọpụta, wee mụọ banyere nkà ihe ọmụma na okpukpe nke Ọwụwa Anyanwụ. Dị ka Chris si kwuo, n'oge ahụ, "naanị ndị anyị maara bụ ndị nkọwapụta ma ọ bụ ndị na-agụ kaadị" (Shin 2014). Na 1971, mgbe ya na ya bi na Christchurch, Phil nwere ọhụ nke ekwensu ebe ọ nọ n'ọkwa ọkara. N’ụjọ, ọ tetara wee tie mkpu sị, “Jizọs!” Di na nwunye ahụ ji ụjọ nke ukwuu kpee Ekpere Onyenwe Anyị ọnụ. N’ụtụtụ echi ya, ha kpọrọ otu enyi ha, aha ya bụ Dorothy, maka ndụmọdụ. Dorothy, onye gụrụ kaadị tarot, tụrụ aro ka ha gaa na obodo nwere mmụọ. Ka osi di, nne Dorothy, May, onye batara n’izu uka ato gara aga, nuru mkparita uka a. May nwetara nọmba di na nwunye ahụ n'aka Dorothy wee kpọọ ha na ekwentị, na-etinye ha na ụka nke Chineke (Pentikọstal). Sunday na-esote, Phil na Chris gara chọọchị ahụ, nke dị na Sydenham, nke dịpụrụ adịpụ na mpụga nke Christchurch, nke onye ụkọchukwu aha ya bụ Dennis Barton duziri. Na ngwụcha nke ọrụ a, ụkọchukwu kpọrọ ndị ọgbakọ niile ka ha nabata Jizọs Kraịst. Ma Phil ma Chris jere n'ihu wee mụọ ha ọzọ. Izu atọ ka nke ahụ gasịrị, mgbe chọọchị ahụ rịọrọ ya, di na nwunye ahụ lụrụ (Barclay 1987). [Foto dị n'aka nri]
N’okpuru ntụzi aka nke ụkọchukwu Dennis Barton, Phil na Chris ghọrọ ndị ndu ndị ntorobịa na ụka ahụ. Ha na otu n’ime ndị ụka ọzọ kwakwara n’otu nnukwu ụlọ, na-enwe nzukọ ekpere n’abalị Mọnde nke dọtara n’etiti mmadụ iri asaa rue otu narị. Na 1972, otu ụkọchukwu si Sydney, Australia, Paul Collins, bịara otu nzukọ nzukọ ụlọ ha. O kwuru, sị, "Oh, anyị chọrọ ụdị ihe a na Sydney." Phil chetara ihe omume a dị ka oge Chineke mere ka ọ hụ ọhụụ na ọ ga-eduga otu ụka na Sydney (Barclay 1987).
N’afọ 1973, a gwara ụkọchukwu Dennis Barton ka ọ rituo dị ka ụkọchukwu ma pụọ ​​na ụka. Nke a kpatara nnukwu nghọtahie n'ọgbakọ. Phil na Chris gbasiri ike mkpebi banyere otu ha ga-ahapụ ma ọ bụ na ha agaghị ahapụ. Na njedebe, ha sooro Barton ma nyere ya aka ịtọ ụka ọhụrụ na Christchurch (Barclay 1987).
Otu oge mgbe ya na Barton rụkọọrọ ọrụ ụkọchukwu na Christchurch, Phil nwere oku siri ike ibido ụka na Sydney. Onye ụkọchukwu Paul Collins gwara ya ka ya na ya nọrọ n’ọgbakọ dị na Sidni. Phil kwenyesiri ike na Chris mee njem ahụ, na-enwe obi ike na ọhụụ ya ga-arụpụta n'oge na-adịghị anya. Otú ọ dị, mgbe m nọsịrị nanị ọnwa ise na Sydney, ọ bịara doo anya na nke a abụghị oge kwesịrị ya. Di na nwunye a enwetaghi ihe ịga nke ọma na ọrụ ọhụrụ ha, a manyere ha ịlaghachi Christchurch. Phil daa mbà n’obi. O kpebiri ịrụzu ozi ahụ nke ọma, ọ wee rụọ ọrụ dị ka onye na-esite na ya (Pringle 2005: 71).
Ka m na-arụ ọrụ dị ka onye na-ekesa akwụkwọ ozi, Phil chọrọ ka ọ bụrụ ụkọchukwu jiri nwayọọ nwayọọ laghachi. Ya na Chris mere mkpebi ịkwaga Lyttleton, nke dịpụrụ adịpụ na mpụga Christchurch, ịmalite ọgbakọ nke ha. Ha chịrị chọọchị a afọ atọ. N'ime oge a, ekwuru Phil na ọ natara ihe ịrịba ama sitere n'aka Chineke na ọ ga-akụ ụka n'otu ụbọchị na Sydney, chọta Christian College. Na 1978, Phil natara ọkpụkpọ oku ka o mee nkwusa na mkpọchi obi na Madras, India. Mgbe ọ laghachiri New Zealand, ụgbọ elu ya kwụsịrị na Sydney. Mgbe ọ rutere, Phil nụrụ ihe ọ tụgharịrị ka olu Chineke na-ekwu, "Achọrọ m ka ị bịa Sydney" (Barclay 1987).
Mgbe afọ ahụ gasịrị, Phil na Chris debere n'otu ụlọ dị na Lyttleton. Kaosinadị, ngwa ngwa etinye ego ahụ, Phil kwara ụta maka mkpebi ahụ, na-enwe mmetụta siri ike na ya na Chris chọrọ ịga njem gaa Sydney iji kụọ ụka. O mere ka o kwenye ịhapụ ego ahụ, na 1980 ha kwagara Sydney na ụmụ ha atọ, Daniel, Rebeka, na Joseph. Ndị na-eso ha bụ Simon na Helen McIntyre, Alison Easterbrook, na nwanne Phil.
Na 1980, Phil na Chris bidoro Christian Center Northside Church, nke ha weghaara n'aka Paul Collins, onye kwagara Hong Kong ịrụ ọrụ ozi ala ọzọ. Ọrụ mbụ ha, Ọrụ Ista, emere na Dee Why Surf Club na Oxford Falls ma nwee naanị mmadụ iri na abụọ bịara. Agbanyeghị, n'ime afọ anọ, ụka ha toro narị anọ.
N'ime 1980s, Phil na-ebute ụzọ n'ọtụtụ osisi ụka, nke mbụ gbara Sydney, wee gafee n'akụkụ ndị ọzọ nke Australia. N’oge a, ha degharịrị ụka ahụ aha, “Christian C Chọọchị Katọlik. ” Na 1984, Phil guzobere thelọ Akwụkwọ Grammar nke Oxford Falls yana Christian City Church (nke ugbu a C3) College. N'afọ 2008, na nzukọ “Here We Go” zuru ụwa ọnụ nke emere na Hawaii, ụka gbanwere aha ya na "C3 Church."
Chọọchị C3 abịawo ogologo oge site na mmalite ya dị ala. Ọ bụ ezie na Oxford Falls ka nwere ụlọ akwụkwọ isi ụka, C3 SYD Oxford Falls (nke gụnyere nka na kọleji bible, ụlọ akwụkwọ grammar, ụlọ ihe nkiri telivishọn, kafe, ebe a na-egwu ihe nkiri, na ụlọ mgbakọ), mmadụ nwere ike ịchọta Chọọchị C3 gburugburu ụwa (na nke ọ bụla kọntinent belụsọ Antarctica). [Foto dị n'aka nri] N'ihe gbasara 2020, C3 Church Global na-etu ọnụ karịa ụka 500 na mba iri isii na anọ (C3 Church Global 2020a).
Otutu ihe ịga nke ọma nke mmeghari C3 bụ nsonaazụ nke ikike ndu Phil Pringle na achụmnta ego na-enweghị mgbagha. Kemgbe mmalite nke mmegharị ahụ, ọ gbalịsiri ike ịgbasa iru C3 ruo n'akụkụ anọ nke ụwa, nke ọ rụzuru site na nkwusa siri ike, mmụọ mara mma, na-akpali ịnụ ọkụ n'obi nke ndị ozi ala ọzọ, na ijikwa ihe kachasị ọhụrụ teknụzụ mgbasa ozi mgbasa ozi na ụzọ ahịa. Phil abụrụla onye na-ekwu okwu ihu ọha na-achọkarị, ma n'okpukpe na nke azụmahịa (na azụmahịa), na-ekwu okwu na isiokwu dị ka dị iche iche dịka okwukwe Ndị Kraịst, idu ndú, ego onwe onye, ​​na ịkụ ụka. Ọ na-ejegharị mgbe niile gburugburu ụwa iji kwuo okwu na nzukọ, [Foto dị n'aka nri] na-ekwusa nkwonkwo nke nkà mmụta okpukpe na Pentikọstal na ọganihu, nke a na-eme nke ọma iji rịọ maka oge ọhụụ nke oge a (na nke ụwa).
N'ọtụtụ ụzọ, ozi Phil dị ka ụdị enyemaka onwe onye Christianized, lekwasịrị anya n'inye ndị mmadụ ike ịghọ ndị isi nwere isi. Agbanyeghị, ọdịbendị ya na ọdịnala ya na-akpụzikwa nkuzi ya. Dịka ọmụmaatụ, ọ na-ekwusi ike dị ukwuu n'okwu ya n'okwu banyere okike, izi ezi onwe onye, ​​na nghọta onwe onye. Phil na-akwadokwa mmemme telivishọn, "Ndụ Gị Kachasị Mma na Mmemme Phil," nke pụtara na ACC na Australia na TBN na Europe, ma na-agbasa taa na YouTube. Na mgbakwunye na ikwu okwu n'ihu ọha, Phil edeela akwụkwọ karịrị iri na asaa, gụnyere: Vinggagharị na Mmụọ Nsọ (1994), Igodo nke ego maka oke ego (2003), Okwukwe: vinggagharị Obi na Aka nke Chineke (2005), Ilu nke Nkịta (2014), na Onye ndu 101 (2018). Agbanyeghi na otu n'ime akwukwo ya aburula ndi kacha ere ahia mba nile, ha enyela aka n'inye ihe kariri “Omenala C3”.
Chris Pringle arụwokwa oke ọrụ n'ịgbasa iru ụlọ ụka C3. Na 1980s na 1990s, ọ bụ onye ọbụ abụ n’egwuregwu Ndị Kraịst. Dika onye ndu ndi otu a, o na-ekwusa ozi oma mgbe nile na nzuko C3 na ihe omume, ma site na mbido jere ozi dika Onye isi Ala na isi ulo akwukwo ulo uka na Oxford Falls. Kemgbe 1998, Chris na-eduzi ya Nwanyị ọ bụla na-ezukọta, umuaka ndi C3 a na eme kwa afo putara inye ike na iwusi obodo ndi nwanyi C3 ike. Na 2005, o bipụtara Jesse: Ochoro ya n’elu igwe, nke na-akọ banyere ahụmahụ ya ime pụrụ, na otu o si wute nwa ọ bu n'afọ.
Dika edere ya, Phil bu onye isi ndi C3 Church Global, onye isi oche nke ndi isi ulo akwukwo Oxford Falls Grammar, na onye isi nke C3 College. Ọzọkwa, Phil na Chris bụ ugbu a ndị isi ndị isi nke Chọọchị C3 niile dị na Sydney [Foto dị n'aka nri] (ọ bụ ezie na n'ọnwa Nọvemba 2021, ha na-ezube ịhapụ ma bụrụ Pastorkọchukwu Emeritus (C3 Church Sydney 2020)). bụrụ nzukọ mba ụwa, na-agbụ ọtụtụ narị ụka gburugburu ụwa, ihe isi ike Phil na Chris siri ike ịchọpụta.
N'ọnwa Nọvemba 2020, weebụsaịtị C3 Church Global depụtara nkwenkwe ụka ndị bụ isi dị ka ndị a:
Otu Chineke di: Chineke Nna, Chukwu Ọkpara, na Chukwu Mmụọ Nsọ.
N’ime chi nke Dinwenụ anyị Jesu Kristi Nwa Chukwu; anyị kwenyere na ọmụmụ ya nke amaghị nwoke, na ndụ enweghị mmehie ya, na ọrụ ebube Ya, na mmeri ya na ọnwụ mkpuchi ya, na mbilite n'ọnwụ ya, na nrigo ya n'aka nri nke Nna, ịrịọchitere ya mgbe niile na nloghachi ya dị nso.
Na njirimara na ọrụ nke Mmụọ Nsọ ya na nkpuru ya na onyinye ya di na nzuko.
Akwụkwọ Nsọ bụ okwu Chineke dị ndụ. Ọ bụ adighi-agha agha, ikike ma na-adịru mgbe ebighi ebi na ọ bụ ntọala nke nkuzi Kraịst niile.
Odidi adia nke ojo ojo nke amara dika ekwensu.
Na ọnọdụ ime mmụọ nke mmadụ niile furu efu na mkpa ọ dị maka ịmụ mmadụ ọzọ site n'okwukwe na Jizọs Kraịst.
Na baptism nke Mo Nso dị ka onyinye dịịrị ndị kwere ekwe na-esochi ịmụ ọzọ, nke nwere ezigbo ihe akaebe nke ikwu okwu n'asụsụ ndị ọzọ
Na sacrament nke Nri Anyasi nke Onye-nwe-ayi na baptism site na nmikpu miri na mmiri maka ndi nile kwere ekwe.
Na nbilite n’onwu nke ndi a zoputara na ndi furu efu, otu na ndu ebighebi na nke ozo rue mgbe ebighi ebi n’ebe Chineke no.
N’ulo uka ahu bu aru nke Kraist, na onye otu ọ bụla ịbụ akụkụ dị egwu nke ụka dị na mpaghara, na-emezu nnukwu ọrụ.
Ọ bụ Chineke malitere alụmdi na nwunye, ọ bụkwa Jizọs kwadoro ya, ọ bụ naanị n’etiti nwoke na nwaanyị. Ọ bụ ihe osise nke Kraịst na chọọchị ya.
Mmekọahụ bụ onyinye sitere n'aka Chineke maka ịmụ nwa na ịdị n'otu, ọ bụkwa naanị kwesịrị ekwesị n'ime ma bụrụ maka alụmdi na nwunye. (C3 Chọọchị Global 2020b)
Dika nkwuputa nke nkwenkwe a doro anya, Chọọchị C3 dara kpam kpam n'ime ogige izi ozi ọma dịka ọ na-agbaso ọnọdụ ọdịnala na nkuzi, dịka ọmụmụ nwa na-amaghị nwoke nke Jizọs Kraịst, eziokwu nke ọrụ ebube dị ka a kọrọ na Akwụkwọ Nsọ, na nlọghachi dị nso Kraịst. Na mgbakwunye na nkwenkwe okpukpe, C3 Church n'otu aka ahụ kwenyere na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na-ele alụmdi na nwunye anya dị ka naanị nke nwoke na nwanyị na nwoke na nwanyị inwe mmekọahụ dị ka mmehie. Agbanyeghị, Cka C3 bụkwa nke ezinụlọ "Pentikọstal", na-ekwusi ike ka Phil na Chris na-eme, [Foto dị n'aka nri] baptism na Mmụọ Nsọ, glossolalia (ịsụ asụsụ dị iche iche), ịdị adị nke agha ime mmụọ, na nkwa nke Chineke na-agwọ ọrịa.
Akụkụ Pentikọstal nke nsụgharị nke Iso ofzọ Kraịst nke Phil na Chris nwere ike ịmaliteghachi na ntụgharị ha na Nzukọ nke Chineke Church na Sydenham. Otú ọ dị, o doro anya na, ọ bụrụ na di na nwunye ahụ debanyere aha na Pentikọstal oge gboo (nke a na-enyo enyo), kemgbe ọtụtụ afọ, ha esiwo na ya wezụga onwe ha (dịka ọmụmaatụ, C3 Church anaghị anọ na netwọk ụka Pentikọstal sara mbara na Australia, ndị Christianka Ọstrelia Christian (ACC). N'ezie, nkà mmụta okpukpe C3 bụ echiche kachasị mma dị ka njikọta nke Pentikọstal ma ọ bụ Charismatic Christian motifs na echiche ya na ozi ọma ọganihu.
Oziọma ọganihu nwere isi mmalite ya na mmegharị okpukpe nke narị afọ nke iri na itoolu, New Thought (nke a na-akpọ mgbe ụfọdụ "ọgwụgwọ uche) na Science Christian, nke, n'otu ụdị ma ọ bụ ọzọ, na-akwado nkà mmụta ihe omimi dị elu, tụụrụ ime nke onwe dị ka onwe ya Chineke, ma kwado ikike zuru ụwa ọnụ maka ọganihu na ọgwụgwọ anụ ahụ (Coleman 2000: 47). N'ikwu nke a, ndị nkwusa ọganihu nke narị afọ nke iri abụọ jikọtara ọdịnala okpukpe ndị a na-atụgharị uche na usoro echiche ụwa dịka echiche ziri ezi, enyemaka onwe onye, ​​na akparamaagwa dị mma, omume nke na-adịwanyewanye elu (Coleman 2000: 127). N'ọnọdụ ọ bụla, ozi ọma ọganihu na-eguzosi ike n'ime ọdịnala America nke ịkpa ike na ịdabere na onwe ya.
Dabere na ọkọ akụkọ ihe mere eme Kate Bowler (2013) ozioma bara ụba na-adabere na isiokwu anọ: okwukwe, akụnụba, ahụike, na mmeri (2013: 7). Otu n'ime isiokwu ndị a pụtara ìhè na nkà mmụta okpukpe C3. Dịka ọmụmaatụ, n'ime Okwukwe: vinggagharị Obi na Aka nke Chineke, [Foto dị n'aka nri] Phil Pringle (2005) dere, “Okwukwe bụ oge nnupụisi. Ọ na-agafe oge n'ime ọdịnihu; ọ na-enwe ahụmahụ nke ihe ga-eme n'ọdịnihu. Ma ọ na-eche na ihe omume ahụ na 'ugbu a.' Okwukwe anaghị eme ka a ga-asị na ọ nọ ebe ahụ. Ọ naghị atụ anya na ọ nọ ebe ahụ. Ọ naghị eche n'echiche na ọ nọ ebe ahụ. Okwukwe mara na o di n ’ihi na o nwere ihe diri ahuhu, ma obu ihe ahu n’onwe ya. Okwukwe bu ihe ihe di; ọ na-adị na 'ihe' dị n'ime obi ugbu a. N'ihi na ọ dị n'ime m, amaara m na ọ dị "(2005: 66).
Ihe Phil na-akwado ebe a bụ ụdị nke "nkwupụta ziri ezi," nke na-ezo aka n'echiche bụ na "a na-ahụta" okwu ndị e kwuru 'n'okwukwe' dị ka ebumnuche nke eziokwu "(Coleman 2000: 28). Dabere na nkà mmụta okpukpe C3, ezigbo okwukwe anaghị agbanwe agbanwe kama ọ na-arụ ọrụ, nwee ike igosipụta ihe na ụwa mpụga. N'ụzọ na-akpali mmasị, n'ụzọ dị otú a, ozi ọganihu nke C3 nwere ihe yiri nnukwu mmụọ ime mmụọ ọhụụ (Watts 2019).
Ọzọkwa, ịkpakọba akụ na ụba na-arụ ọrụ dị oke mkpa na nkuzi C3. Ọ bụghị naanị na a na-agba ndị otu C3 ume ka ha baa ọgaranya, mana a na-ewere akụ na ụba dị ka ihe ama nke ngọzi Chineke. Na Igodo nke ego maka oke ego [Foto dị n'aka nri] Phil Pringle (2003) dere, “Ndị na-etinye oge dị ukwuu na-anabata ụkpụrụ na nkuzi nke Akwụkwọ Nsọ ga-eketa otu mmụọ na ụkpụrụ nke ihe ịga nke ọma na ụba nke so ndụ ndị ọgaranya na ndị rụzuru onye dere ya ”(2003: 45). Ọ na-agbakwụnye, “Onyenwe anyị chọrọ inye anyị ọtụtụ ihe! ” (2003: 50). N’ezie, ọ bụrụ na Chineke chọrọ ka Ndị Kraịst niile kwesịrị ntụkwasị obi baa ọgaranya, ọ pụtara na ọ bụrụ na mmadụ dara ogbenye, ọ bụ n’ihi enweghị okwukwe. Ma n'ezie, enwere echiche a, ma ọ bụrụ na akwadoghị ya kpamkpam, n'ihe odide Phil (lee dịka ọmụmaatụ, Pringle 2005: 186) (lee foto mkpuchi akwụkwọ).
Banyere isiokwu nke ahụike na mmeri, ọ bụ ụkpụrụ bụ isi nke nkà mmụta okpukpe C3 na ịba ọgaranya abụghị naanị ịbụ aka ji akụ na ụba, kamakwa iji nwee ezigbo ahụike na njirimara onwe onye. Dị ka Phil (2005) si kwuo, “Ọdịdị onwe onye dara ogbenye abụghị naanị obere nkwarụ na ndụ. Ọ bụghị naanị ibu ọzọ ka ọ na-adịghị atọ ụtọ ibugharị. Ọ bụ nnukwu nsogbu nye ndụ anyị na Chukwu. ” N'ihi ya, ọ na-adụ ọdụ ịgbanwe "ịkpọasị onwe anyị" gaa "ịhụnanya onwe" (2005: 151). Ihe omuma nke Phil Pringle banyere agha ime mmụọ abughi nke oma na okwu ogwu: “Ekwensu bu onye choro idobe gi ka i ghara iru eru na onye ekwesighi” (2005: 154). Ya mere, n'ime echiche C3, echiche nke mmeri (nke gụnyere inwe mmetụta dị mma banyere onwe gị, inwe ntụkwasị obi na onwe gị) bụ ihe dị mma, ebe a na-eme ka echiche nke onye a na-eme ihe na-adịghị mma. Phil chịkọtara nke a, "Okwukwe bụ mmụọ nke mmeri n'ime" (Pringle 2005: 32).
Ọ bụ ezie na Chọọchị C3 nwere ike ịdaba na ogige ndị Protestant na-agbanwe agbanwe n'ihe banyere nkwenkwe ya ekwuputara, ọ bụ ihe doro anya na n'okwu ma n'ụdị, ọ jirila ịnụ ọkụ n'obi nabata usoro ọgwụgwọ na ọgwụgwọ nke 1960s. Ọkammụta ihe banyere mmadụ n'ihe banyere ọdịmma mmadụ bụ Simon Coleman (2000) na-ezo aka na nke a dị ka "'Californication' nke ndị Protestant na-achọghị mgbanwe," nke na-arụtụ aka n'ụzọ ụfọdụ ndị na-ahụ maka okpukperechi si "nabata usoro mmegide, ọgwụgwọ, ọdịnala ọdịbendị nke ụmụ ọhụrụ boomers" (2000: 24 ). Otu ezigbo ihe atụ nke ebe obibi a gosipụtara n'ụzọ Phil na Chris na-ekwuputa mgbe niile na C3 abụghị "okpukpe," dịka "okwukwe," usoro nkwupụta okwu gosipụtara ngosipụta nke ịbụ "mmụọ ma ọ bụghị okpukpe" nke nwere Bụrụ ebe nkịtị na mbubreyo ọha mmadụ nke oge a (Watts 2020). N'ezie, ọ bụ n'ọtụtụ akụkụ n'ihi ụlọ ụka ahụ maka nnabata mmadụ n'otu n'otu nke na-akọwa ọdịbendị ọdịnala nke ọdịda anyanwụ na narị afọ nke iri abụọ na otu na Chọọchị C3 enweela ihe ịga nke ọma na-adọta ndị na-eto eto "hipster" bụ ndị na-ahụ ụka dị ka ụzọ ọhụrụ na nnupụisi ka "mee ụka" (Watts 2020b).
Ọ bụ ezie na ọ bụghị ụka C3 niile ka a ga-ahụta dịka megach ụka kwesịrị ekwesị (ndị nwere ihe karịrị puku abụọ na-abịachi anya), ọbụlagodi ogige C3 nke nwere ọgbakọ pere mpe na-achọ ịmegharị mma, ụdị, na mmetụta nke ogige Oxford Falls. Ihe kpatara nke a bụ na ọrụ ofufe C3 egosila na ọ dị oke mkpa na-enyere ụka aka ịdọta ma gbanwee ndị otu.
Otu ihe dị oke mkpa na ihe ịga nke ọma ha bụ ọrụ nke egwu ofufe. Chọọchị C3 agbaala mbọ iji ngwa ụda kachasị arụ ọrụ na teknụzụ arụmọrụ iji nye ọrụ ụbọchị ụka ha mmetụta nke egwu egwu egwu nke oge a [Image na nri].
Ọzọkwa, na ọrụ C3 ọ bụla, otu na-ahụkarị ndị na-eto eto mara mma (ndị na-abụ abụ na ndị na-agụ egwú) na-abụ abụ nke a na-atụgharị egwu ha na nnukwu ákwà nke na-adabere n'azụ ebe ahụ. Ha na-abu egwu ndi egwu egwu egwu ndi Christian na egwu egwu edere ma meputa na C3 College. N'ezie, okike na mgbasa nke egwu ofufe mbụ ha dị ezigbo mkpa na ebumnuche ebumnuche nke ụka (mmadụ nwere ike ibudata egwu C3 n'ụzọ dị mfe n'ọtụtụ ngwa egwu). Agbanyeghị, ọrụ ndị ahụ na-arụ abụghị naanị maka ndị otu nọ na ndị na-ege ntị, kamakwa iji "modelomie ụzọ ziri ezi iji mata ọnụnọ Chineke" (Jennings 2008: 163). Ya mere, site na mgbe mmadụ banyere n’ofufe Chukwu nke C3, a na-azụ ya nka na nka nke “metakinesis,” okwu nke onye ọkọnọ ihe banyere ihe banyere mmadụ bụ Tanya Luhrmann (2004) na-eji arụtụ aka n’ụzọ dị iche iche ndị mmadụ si amata iji mata ma mata ọnụnọ nke Chukwu na ahụmahụ ha (2004: 522). Ọ na-esote na iji ofufe ofufe na ọrụ Sọnde na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịmepụta gburugburu ebe obibi dị iche, nke na-eme ka o kwe omume na ndị bịara ga-ahụ ọnụnọ nke Chineke (Wellman et al. 2014).
Ihe ọzọ kpatara C3 ji enwe ihe ịga nke ọma metụtara aesthetics. Iji dọta ndị bịara ọhụrụ, ụka C3 na-achọ iwepụ ihe mgbochi nwere ike isonye na omenaala. Yabụ, kama ịbụ ukwe, a na-akpọ egwu ndị Kraịst a ma ama nke yiri igwe redio Top-40; kama ime n'ime ụlọ ụka ochie, ọrụ na-emekarị n'ụlọ nkwakọba ihe ma ọ bụ ihe omuma; na karịa akwa ọdịnala, uwe ejiji hipster na-eyi uwe na-adịkarị mma. N'ezie, ụka C3 na-adịkarị ka saịtị ndị ọzọ a na-ahụkarị maka ezumike na ọha mmadụ nke oge a, dịka nnukwu ụlọ ahịa, ebe egwuregwu, ma ọ bụ ihe nkiri nkiri (Maddox 2012: 153). [Foto dị n'aka nri]
N'ezie, n'ikwekọ na nzụlite ha nke Pentikọstal, ndị isi ụka C3 na-eme ọgwụgwọ karịrị ike mmadụ, baptizim zuru ezu nke mmiri, na ịsụ asụsụ dị iche iche, agbanyeghị, ọha na eze na-echebe omume ndị a. Nke ahụ bụ, ha na-ewere ọnọdụ naanị na ọrụ C3 na nzukọ, ebe a machibidoro mgbasa ozi iwu. Yabụ, ụka na-agbasi mbọ ike ịghara ịhapụ ndị ọdịbendị ọdịnala ha nwere ike ịdabere na ndị isi na mbubreyo ọha mmadụ nke oge a.
N'ikpeazụ, n'ụdị nkwusa ozioma, a na-agba ndị otu C3 ume mgbe niile, mgbe ha na-aga ụka, ịgụ akwụkwọ nsọ ha kwa ụbọchị, sonye na mmemme C3 na ihe omume, soro ndị Kraịst ndị ọzọ na-akpakọrịta, ma nyochaa mmetụta ha na ahụmịhe ha nke ọma maka ihe akaebe nke ma Chineke ma Ekwensu . N'ụzọ dị otú a, nkà mmụta okpukpe C3 na-arịọ ndị òtù ya ịdọ aka ná ntị n'ụzọ kwekọrọ na ozi ya nke ikike onwe onye na ọganihu ihe onwunwe.
C3 Church Global, edenyere aha dị ka ọrụ ebere sitere na Sydney, na-elekọta usoro ụka mba ụwa. Ndị isi nchịkwa C3 Church Global, nke Phil Pringle duziri, na-enye ntụzi, ọhụụ na ebumnuche maka mmegharị ahụ nnukwu. N’okpuru ha ka ndị isi ọchịchị mpaghara (ndị ha niile bụ di na nwunye nwoke na nwanyị) na-anọchi anya ụka dị iche iche C3 dị n’otu mpaghara. Mpaghara ndị a gụnyere Australia (nke nwere ụka 106), Amerika (ya na iri anọ na isii), Canada (nke nwere iri na itoolu), East Africa (nke ji iri asatọ), Mena (nke nwere iri anọ na isii), East Asia (ya na atọ), Europe (yana iri atọ na asatọ), South Asia (ya na iri asatọ na anọ), South East Asia (ya na iri asaa na ise), Southern Africa (nke nwere iri abụọ na isii), West Africa (itoolu), na Pacific (nke nwere iri ise na ise) (C3 Global 2020c). N'ime mpaghara a kapịrị ọnụ, ndị isi ụka na-ahụ maka ịnye ndị pastọ mpaghara nkwado na nkwado. Onye isi ụka C3 ọ bụla bụ Onye Isi Ndị Isi, ndị na-akwado Junior Pastors mgbe ụfọdụ.
A na-emekọ ihe ọnụ na nkwekọrịta nke Chọọchị Movement site na mmemme na nzukọ kwa afọ, nke na-adọta ndị ndu C3 na ndị otu si gburugburu ụwa. Nke kachasị n'ọnụ ọgụgụ n'ime ha bụ "Nzukọ Ọgbakọ," [Foto dị n'aka nri] nke a na-eme na ọnọdụ dị iche iche kwa afọ, nke na-enye ndị otu C3 mpaghara ohere ịnụ ka ndị ụkọchukwu nke ndị isi na-ekwusara ozi ọma n'onwe ha, yana ohere maka idu ndú kpọsaa ihe mgbaru ọsọ ọhụrụ na ntuziaka maka mmegharị ahụ.
N'otu oge ahụ, C3 College dị na Oxford Falls ka rụọ ọrụ ogologo oge dị ka incubator maka ịchọrọ ndị pastọ C3; ọtụtụ ndị na-ejide ọnọdụ ndị isi ugbu a gụsịrị akara na kọleji. Na C3 College, ụmụ akwụkwọ nwere ike ịnara ihe omumu na akwukwo akwukwo na omuma, egwu, ihe nkiri, na mgbasa ozi, ma na mmadu na intaneti. [Foto dị n'aka nri]
A na-elekwasị anya na nkwukọrịta mgbasa ozi na ịzụ ahịa dijitalụ n'ime njem ahụ. Chọọchị ahụ na-adabere na ọrụ efu nke ndị òtù ya na-emepụta ihe iji kesaa ma kesaa mgbasa ozi C3 Church, ma kwalite "akara C3" gburugburu ụwa. N'ezie, ndị na-azụ ahịa nwere ike ịzụta ngwa ahịa na ngwaahịa C3 n'ịntanetị site na "Storelọ Ahịa C3," nke na-ere ihe niile ugbu a site na uwe, akwụkwọ, na usoro ọmụmụ dijitalụ na mmepe onwe onye, ​​ndu, na Masterclass na ịkụ mkpụrụ ụka. Na afọ ndị na-adịbeghị anya, ụlọ ụka ahụ etolitela ngwa nke ya, "C3 Church Global App," nke ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike iji chọta urcheska C3 n'obodo ha na obodo ha.
Ọ bụ ezie na C3 Church Global yiri ka ọ bụ ọrụ dị oke mkpa, ọ na-egosipụta ogo dị oke mma nke atụmatụ tozuru etozu. N'ezie, ụka na-arụ ọrụ dị ka ụlọ ọrụ na-achịkwa mba ọzọ n'ihi na ọ bụ ndị isi ndị ụkọchukwu na-eduzi ya bụ ndị na-akwado usoro nlekọta elu ma na-enye iwu "nrube isi na omenala nzukọ" (Maddox 2012: 152). N’ụzọ dị otu a, 3ka C2008 bụ nke JB Watson na Walter H. Scalen (2008) kpọrọ “ọgbakọ uto ụka,” nke ha na-azọrọ ka akọwapụtara ya site n’ụkpụrụ anọ ndị a: mmesi ike na ọnụọgụ ọnụọgụ nke ịga nke ọma dịka ịga ofufe. na ọnụ ọgụgụ nke ndị tọghatara ọhụrụ; gbado anya na "Ọnọdụ okwu, ya bụ, ụka na-ezisa ozi ya n'ime ọnọdụ ọdịbendị"; ngwa nke usoro ahia ahia nke oge a; na uru nke ịrụ ọrụ net na ụka dị ka otu (171: XNUMX).
N'ikpeazụ, nyere na Chọọchị C3 ebilila nke ọma n'otu afọ a na-agbasasị Ọha Ọha na Australia, ọtụtụ ndị ọkà mmụta na-arụ ụka na ihe ịga nke ọma ya sitere na mmekọrịta nhọrọ ya na amụma akụnụba neoliberal (Shanahan 2019).
Phil Pringle, na C3 Church n'ozuzu ya, katọrọ ndị isi ndị otu Kraịst na otu dị iche iche maka ikwusa nsụgharị nke Iso Christianityzọ Kraịst nke ha na-ewere dị ka onye jụrụ okwukwe, nke na-emighị emi, na nke rụrụ arụ. N'ezie, onye kọwara onwe ya ndị otu C3 mbụ setịpụla websaịtị nchekwa ndị otu Kraịst, "C3 Church Watch," pụtara iji dọrọ uche gaa n'ihe ha na-ahụ dịka nkuzi ụka na-esiteghị na chọọchị ma mee ka ndị ọzọ gbanwee isonye C3. [Image na nri]
Ọzọkwa, C3 Church a manyere ka ihu igwe nke ọtụtụ ihere ọha na eze na-adịbeghị anya. Na 2017, a mara onye ụkọchukwu C3, Nicholas Dimitris ikpe isonye na atụmatụ "onye na-agbaziri ego" iji ghọgbuo ụlọ akụ dị na mpaghara (Weaver 2015). Na 2017, Mosaic Defredes, a mara onye ụkọchukwu C3 ikpe maka nnukwu izu aghụghọ (Dunn na Sutton 2017). E kwukwara na onye ụkọchukwu C3 ọzọ, Anthony Shalala kwụrụ $ 300,000 ka ọ kwụọ ụgwọ ịhapụ ụka ahụ na-esochi ịkwa iko (Passi 2019).
N'ikpeazụ, na 2019, mmemme akụkọ telivishọn Australia, Nsogbu ugbu a, gbara ekpughe nke ụka. Igosipụta ihe akaebe na-ezighi ezi sitere n'aka ndị otu C3, tinyere ihe nkiri nke ihe omume C3 na mkparịta ụka na-adịghị mma na Phil Pringle, [Foto dị n'aka nri] mmemme ahụ weere ọnọdụ dị oke mkpa na nkà mmụta okpukpe nke ụka, omume ego, ịbịaru ọrịa ọgụgụ isi, na echiche nke nwoke na nwoke na nwanyi (Passi 2019).
Na nzaghachi nke ebubo ahụ, ụlọ ụka ahụ gọnarịrị ihe ọjọọ ọ bụla, ma kwuo na n'ihe metụtara mmekọ nwoke na nwoke, "ụzọ anyị si makụọ mmadụ niile ma lekọta ha dabere na oke okwukwe anyị siri ike na Chineke anyị juru eju. nke ịhụnanya na ọmịiko maka mmadụ niile, n'agbanyeghị ọnọdụ nke onwe ha ma ọ bụ nhazi mmekọahụ "(C3 Church Sydney 2019). Esemokwu yiri ka esemokwu dị n'etiti mkpebi nke ụka na mmekọrịta nwoke na nwoke (dị ka nke a na-egosipụta na nkwupụta nzuzo nke nkwenkwe ha) na nkwupụta ihu ọha dị ka nke a aghọwo isi okwu na-akpata esemokwu, ọkachasị na ọnọdụ ọdịbendị ndị ahụ ebe a na-elekarị mmekọrịta nwoke na nwanyị anya dị ka ihe na-adịghị mma na nkịtị nkịtị. Dịka ọmụmaatụ, otu onye otu na-akatọ C3 Toronto dị na Kanada n'ihu ọha maka iduhie ya n'ihe metụtara ọnọdụ ha n'okwu gbasara mmekọ nwoke na nwoke (Garrison 2019).
Ọ ga - adị ka, na nke ọzọ, na enwere ezigbo esemokwu na isi ihe a na - eme dịka ọ na - achọ ijigide nkwenye na ọnọdụ mmụta okpukpe na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ma n'otu oge ahụ na - agbaso usoro ọdịnala kachasị ọhụrụ, na - anabata ihe kachasị - ụdị ụbọchị nke teknụzụ, ma na-ewere nkwenye siri ike n'ụwa. Agbanyeghị, ma esemokwu a ga-enwe nsonaazụ na-adịghị mma maka njem ahụ n'onwe ya, naanị oge ga-agwa.
Image # 1: Foto nke Phil na Chris Pringle na agbamakwụkwọ ha.
Foto # 2: C3 akara ngosi ụka.
Foto # 3: Foto nke ikwusa ozi ọma Phil Pringle.
Foto # 4: Foto nke ndị ụkọchukwu bụ Phil na Chris Pringle.
Foto # 5: Foto nke Phil Pringle na-ekpe ekpere na ndị ụka.
Foto #6: Cover nke Okwukwe: vinggagharị Obi na Aka nke Chineke.
Foto #7: Cover nke Igodo nke ego maka oke ego.
Foto # 8: Ọrụ egwu na ọrụ ụka C3.
Foto # 9: ụka C3 dị na Calgary, Canada.
Foto # 10: Nzukọ Ọgbakọ.
Foto # 11: Studentsmụ akwụkwọ na-esonye na klaasị na kọleji C3.
Foto # 12: C3 Church Watch welbsite.
Foto # 13: N'ajụjụ ọnụ mgbasa ozi na Phil Pringle.
Barclay, John. 1987. Bilie! Akụkọ nke Christian City Church. Sydney: Mbipụta Ọgbụgba Ndụ.
Bowler, Kate. 2013. Gọziri agọzi: A History of the American Prosperity Gospel. New York: Oxford University Press.
C3 Church Global. 2020a. “Peeji Mbụ.” Nweta site na https://c3churchglobal.com na 27 November 2020.
C3 Church Global. 2020b. “Ihe Anyị Kweere.” C3 Church weebụsaịtị. Nweta site na https://c3churchglobal.com/what-we-believe/ na 27 November 2020.
C3 Church Global. 2020c. "Nke a bụ anyị." C3 Church weebụsaịtị. Nweta site na https://issuu.com/c3churchglobal/docs/this_is_us_-_c3_global na 27 November 2020.
C3 Church Sydney. 2019. "Media Response To A current Afife." C3SYD, December 5. Nweta site na https://c3syd.church/media-response/ na 27 November 2020.
Coleman, Simon. 2000. Mbịakọ ọnụ nke ụwa niile nke Iso Christianityzọ Kraịst Na-adọrọ adọrọ: Spgbasa Oziọma nke Ọganihu. Cambridge: Ụlọ ọrụ University Press Cambridge.
Dunn, Matt, na Candace Sutton. 2017. “Pastọ Mosaic na‘ onye na-eso ụzọ ya ’Allison kpara nkata nnukwu iberibe palọ Australia nke ọnụ ahịa ya ruru $ 21m.” News.com.au, March 21. Nweta site na https://www.news.com.au/technology/online/hacking/pastor-mosaic-and-his-disciple-allison-masterminded-australias-biggest-piracy-racket-worth-21m/news-story/2b80939ce4e53ff17f304e68d23857ce na 27 November 2020.
Uchechi, Alyssa. 2019. "Enwere m ọdịda maka ụka 'Ọganihu', ma ọ bụ mmejọ." Flare.com, December 10. Nweta site na https://www.flare.com/identity/c3-church-anti-gay/ na 27 November 2020.
Jennings, Mak. 2008. “'you gaghị agbahapụ onwe gị?' Usoro ọdịnala nke otu egwu na mmekọrịta sitere n'aka Chineke na mmadụ na Chọọchị Pentikọstal nke Australia. ” Omenala na Okpukpe 9: 161-74.
Luhrmann, Tanya M. 2004. "Metakinesis: Otu Chineke si di chiri anya na ihe omuma nke ndi Kristain nke US." Ọgwụ Anthropologist America 106: 518-28.
Maddox, Marion. 2012. "'Na Goofy adọba ụgbọala na otutu': ibu ụka dị ka akwụkwọ okpukpe n'ụdị mbubreyo ikeketeorie." Compass Social 59: 146-58.
Passi, Sacha. 2019. “Scott Morrison jikọtara ya na arụmụka‘ ọrụ ebube maka ego ’ụka.” Nsogbu ugbu a. Nweta site na https://9now.nine.com.au/a-current-affair/c3-church-scott-morrison-link-to-scandal-former-pastor/6579a36b-5a9e-462d-bcd4-ccae869081d1 na 27 November 2020.
Pringle, Nkpu. 2005. Okwukwe: vinggagharị Obi na Aka Chineke. New Kensington, PA: itlọ Whitaker.
Pringle, Nkpu. 2003. Igodo nke ego maka oke ego. New Kensington, PA: itlọ Whitaker.
Shanahan, Mairead. 2019. “‘ Ike a na-apụghị igbochi egbochi maka ọdịmma ’?: Kedu ka ọchịchị Neoliberal si mee ka uto nke Megachurches Pentikọstal nke Ọstrelia tolite.” Okpukpe 10: 1-16.
Shin, Yong Tung. 2014. "Ajụjụ ọnụ na 'Blonde Nana': Olee otú Mr na Mrs Pringle zutere." Akụkọ Obodo, March 14. Nweta site na https://www.citynews.sg/2014/03/14/interview-with-the-blonde-nana-how-mr-and-mrs-pringle-met/ na 27 November 2020.
Watson., JB, na Walter H. Scalen. 2008. “‘ Iso Ekwensu na-eri nri ’: Thezọ Okpukpe Ndị Ala nke Evka Chọọchị Evangelical America” Nyocha banyere mmekọrịta ọha na eze 83: 171-80.
Watts, Galen. 2019. "Okpukpe, Sayensị, na Disenchantment." Zygon 54: 1022-35.
Watts, Galen. 2020a. Okpukpe nke obi: 'Ime mmụọ' na njedebe nke oge a. Akwụkwọ bụ American Journal of Cultural Sociology. Nweta site na https://doi.org/10.1057/s41290-020-00106-x.
Watts, Galen. 2020b. "Otu ụlọ ụka ụka hipster evangelical na-ewere Toronto dị egwu," CBC, July 8. Nweta site na https://www.cbc.ca/documentaries/cbc-docs-pov/a-hipster-evangelical-church-is-taking-toronto-by-storm-1.5619110 na 27 November.
Weave, Emily. 2015. "Asaa Falls na-akpa nkata ka ikpe June 2" Blue Ridge Ugbu a.com, April 23. Nweta site na https://www.blueridgenow.com/news/20150423/seven-falls-conspirators-to-be-sentenced-june-2 na 27 November 2020.
Wellman, James K., Katie E. Corcoran, na Kate Stockly-Meyerdirk. 2014. "'Chineke Dị Ka Ọgwụ Ọgwụ Exp': Na-akọwa Mmekọrịta Mmekọrịta Ritual na American Megachurches" Nzukọ Sociological 29: 650-72.